महिला पण्डितले गराइदिइन् विवाह ! – News Nepali Dainik
महिला पण्डितले गराइदिइन् विवाह !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: ६:४२:१०
बलिउड अभिनत्री दिया मिर्जाले व्यापारी वैभव रेखीसँग विवाह गरेकी छन्। विवाह लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा उनको विवाहका तस्बिरहरु भाइरल हुन थालेका छन्। बुधबार विवाह गरेका दिया र वैभवसँग उनीहरुको विवाहमा सह भागी थप एक तस्बिरले यतिबेला सबैको ध्यान तानिरहेको छ।
उक्त तस्बिर हो उनीहरुको विवाह गराउने पण्डितको। उनीहरुको विवाह एक महिला पण्डितले गराएकी थिइन्। विवाहको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै दियाले लेखेकी छन ‘प्रेमको एक पूर्ण चक्रलाई हामी घर भन्छौं। यसको पुकार सुन्न, यसको ढोका खोल्न र फेरि यससँग भेटघाट गर्नु निकै रह’स्यमय छ ।’
उनले तस्बिर सेयर गर्दै आफू सम्पूर्ण भएको पल सार्वजनिक गरेको बताउँदै लेखेकी छन्, ‘मेरो परिवार बढेको छ।’ उनको तस्बिरमाथि प्रतिक्रिया दिँदै केहीले आफूले पहिलो पटक महिला पण्डितले विवाह गराएको देखेको बताएका छन् । उनीहरु विगत एक वर्ष देखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको बताइएको थियो । अन्ततः उनीहरुले विवाह गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
Last Updated on: February 18th, 2021 at 6:50 am